သူမမှာ ချစ်သူရည်းစားများရှိနေပြီလားလို့ ပရိတ်သတ်တွေထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေရတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ရေးထားတဲ့ စာလေးတစ်စောင် – Cele Snap
သူမမှာ ချစ်သူရည်းစားများရှိနေပြီလားလို့ ပရိတ်သတ်တွေထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေရတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ရေးထားတဲ့ စာလေးတစ်စောင်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အနုပညာလောကမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေးဖွေးဖွေးဟာဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ‌အောင်မြင်လာခဲ့တာ ယနေ့ထိတိုင်ပါပဲနော်အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်း ဖွေးဖွေးကပြည်သူလူထုနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်.။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက ” “ As For me ရည်ရှည် သွားချင်တယ်ဆိုရင် ရိုးသားစစ်မှန်ခြင်း လိုတယ်”🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨✨✨ကိုယ့်အပေါ် Loyal မဖြစ်ရင် သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင်မိသားစုဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာကြီးပြဲ ဖစ်နေနေ ဘယ်လိုမှLife Journey မှာ အဖော်အဖြစ်ခေါ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး…ကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးပါသူ ချစ်ရသူ ဘေးမှာရှိစေချင်သူတွေအပေါ် ရိုးသားစစ်မှန် ပြရင်း တန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ… #ဖွေးဖွေး” 🎄🍀🌿🕊🕊ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ပါ တယ်.
သူမ ရေးသားလာခဲ့တဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက ချစ်သူများရှိနေပြီလားဆိုပြီး ကောမန့်တွေနဲ့ မေး ထားခဲ့ကြပါတယ်။ သူမ ရေးလာတဲ့ စာသားကလဲ ချစ်သူအတွက်ကို ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းထင်ယောင်ထင်မှားလေးလည်း ဖြစ်စေတာကြောင့် . ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖွေးဖွေးက ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းပေးခဲ့ကြပါ အုံးနော်…
Source: Shwe Yee Ko Oo
ပရိတျသတျကွီးရေ…အနုပညာလောကမှာ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကောငျးပေါငျးမြားစှာကို ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာ ပီပွငျပိုငျနိုငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အတှကျ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့အခဈြတျောမငျးသမီးခြောလေးဖှေးဖှေးဟာဆိုရငျ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာ ‌အောငျမွငျလာခဲ့တာ ယနထေိ့တိုငျပါပဲနျောအခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေမှောဆိုရငျလညျး ဖှေးဖှေးကပွညျသူလူထုနဲ့တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တာပဲဖွဈပါ တယျ.။
အခုတဈခါမှာဆိုရငျလဲ သရုပျဆောငျဖှေးဖှေးက ” “ As For me ရညျရှညျ သှားခငျြတယျဆိုရငျ ရိုးသားစဈမှနျခွငျး လိုတယျ”🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨✨✨ကိုယျ့အပျေါ Loyal မဖွဈရငျ သူငယျခငျြးဖွဈဖွဈ ရညျးစားဖွဈဖွဈ နောကျဆုံးကုနျကုနျပွောရရငျမိသားစုဆှမြေိုးပဲဖွဈဖွဈ ဘာကွီးပွဲ ဖဈနနေေ ဘယျလိုမှLife Journey မှာ အဖျောအဖွဈချေါသှားဖို့မဖွဈနိုငျဘူး…ကိုယျ့အတှကျတကယျအရေးပါသူ ခဈြရသူ ဘေးမှာရှိစခေငျြသူတှအေပျေါ ရိုးသားစဈမှနျ ပွရငျး တနျဖိုးထားနိုငျကွပါစေ… #ဖှေးဖှေး” 🎄🍀🌿🕊🕊ဆိုပွီးရေးသားလာခဲ့ပါတယျ.
သူမ ရေးသားလာခဲ့တဲ့ ပို့ဈအောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေ ခဈြသူမြားရှိနပွေီလားဆိုပွီး ကောမနျ့တှနေဲ့ မေး ထားခဲ့ကွပါတယျ။ သူမ ရေးလာတဲ့ စာသားကလဲ ခဈြသူအတှကျကို ရညျရှယျတယျလို့လညျးထငျယောငျ ထငျမှားလေးလညျး ဖွဈစတောကွောငျ့ . ပရိသတျကွီးလညျး ဖှေးဖှေးက ဘယျသူ့ကို ရညျရှယျတယျဆိုတာလညျး ခနျ့မှနျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော…
မိခင်ဖြစ်သူ ခင်ဇာခြည်ကျော် ရဲ့အချောအလှတွေကို အမွေရရှိထားကြောင်းမြန်မာဆန်ဆန်ကျက်သရေရှိတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့သက်သေပြလိုက်တဲ့ ထင်သစ္စာ